Biyyoota Garee B jalatti ramadaman afran - BBC News Afaan Oromoo
Biyyoota Garee B jalatti ramadaman afran
Ramaddiin garee biyyoota Waancaa Addunyaa irratti hirmaatanii ba'eera. Garee B jalattis biyyoonni kunneen ramadamanii jiru.
Poorchuugaal shaapiyoonaa Awurooppaati. Bara darbe wlatajjii Awurooppaa guddaa irratti garee Firaansi 1-0 injifatanii Waancaa fudhataniiru. Seenaa Waancaa Addunyaa keessatti qabxiin isaanii inni guddaan bara 1966 nuusa xumuraaf gahuu akkasumas bara 2006 walakkaa xumuraaf darbuu dha.
Bara 2014'tti dorgommii Biraaziil qopheessite irratti marsaa isa duraa darbuu hin dandeenye.
Goodayyaa suuraa Kiristiyaanoo Roonaaldoo taphoota intarnaashinaala irratti biyya isaa Portugaaliif goolii 79 lokkofsiseeera.
Taphataa ijoo: Kiristiyaanoo Roonaaldoon ala kan biraa eenyu ta'uu mala? Yeroo Afur taphataa cimaa addunyaa ta'ee filatameera. Taphataa cimaa garichaa fi gooli galchaa garichaa qixxee hin qabnedha. Riyaal maadriid waliin Chaampiyoonsi Liigii Awurooppaa afur kan injifate Roonaaldoon, tapha gulaallii Waancaa Addunyaa Kanaan biyya isaaf gooliiwwan 15 galcheera.
Leenjisaan Eenyu: Fernaandoo Saantoos itti gaafatamummaa kana kan fudhatan bara 2014'tti. Biyyittii gara injifannoo isa jalaqabaatti geessuun Waancaa Awurooppaa bara darbee argamsiiseera. Waancaa Addunyaa bara 2014 irratti leenjisaa Giriis ta'uun, garicha gara biyyoota 16 tapha marsaa duraa darbaniitti makuu danda'eera. Rukkuttaa peenalitiin Koosataarikaadhaan hanga injifatamaniitti.
Yeroo amma addunyaa irratti sadarkaa 11ffaa irratti argamti. Bara 2008-2013tti garee cimaa addunyaa ta'uun sadarkaa tokkoffaarra turte. Ispeen bara 2010 shaampiyoonaa addunyaa, akkasumas bara 2008 fi 2012 shaampiyoonaa Awurooppaa turte.
Goodayyaa suuraa Guraandhala darbe Ispeen wayita goolii 3-0 Itaalii injifattu goolii lama kan lakkofsise Iiskoodha.
Taphataa ijoo: Taphataan sarara fuulduraa kilaba Riyaal Maadrid Iiskoon taphoota gulaallii keessatti gahumsa gaarii agarsiisuun gooliiwwan jaha lakkoofsiseera. Taphoota torba irrattis kubbaa gooliif ta'u mijeesse kenneera. Taphoota intarnaashinaalii biyya isaaf taphate 23 irratti gooliiwwan torba lakkoofsiseera.
Leenjisaan eenyu: Juulen Loppeeteegii, bara 2016 itti-gaafatamummaa garee kanaa fudhatanii taphoota taphatan 13 keessatti takkallee hin injifatamne. Leenjisaan kun Ispeen waliin Chaampiyooshiippi Awurooppa lama mo'ataniiru. Hanga ammaatti garuu tapha guddaa akkasiirratti hin hirmaanne.
Morokoon waggoota 20 booda yeroo jalqabaaf Waancaa adduunyaatti hirmaachuufi. Bara 1998 Firaansitti tapha 1 moo'uun 1 ammoo walqixa ba'anii tokko injifatamanii ramaddii agreerraa darbuu hin dandeenye ture.
Ramaddiirraa darbuu kan danda'an bara 1986 Meesiikootti biyyoota dhumaa 16 keessa yeroo seenuu danda'anitt ture. Yeroo sanattis sadarkaa 2ffaa ta'uun waancaa duraanii kan dhaban Jarman Lixaatiin moo'amuun ture kan ba'an.
Taphataa adda-duree: kilabasaa Juuveentuus keessatti sarara duubaarratti dorgommii cimaa jiruun filannoo jalqabaa keessa seenuu danda'uu baatus, Mehdii Beenaashiyaan taphataa cimaa garichaa ta'uunsaa beekamaa dha.
Juuveentuus taphataan kun ergisaan sochii gaarii erga agarsiisee booda bara kanatti dhaabbiidhaan Baayer Muuniik irraa kan mallatteessiseeni. Namni umurii ganna 30 kun dursaa taphattootaa Morookoo yoo ta'u, taphoota gulaallii Raashiyaa 2018 galchiin tokko irratti hin lakkaa'amne dabalatee, taphoota waltajjii guddaa kanaa 52 irratti biyyasaa bakka bu'uun taphatee jira.
Goodayyaa suuraa Mehdii Benaashiyaa Caamsa darbetti Baayer Muuniik irraa dhaabbiidhaan gara Juuveentuus gale.
Leenjisaan eenyu: Lammiin Firaansi Hervee Reenaardi erga bara 1998'tti sooroma ba'anii booda leenjisummaa darbee darbee irratti hirmaachaa turani. Hojiiwwan jalqabaa hojjatan keessaa kilabii Kaambiriiji Yunaayitid galuun bara Chaampiyoonshiippii 2004 fi 2005 irratti sadarkaa dhumaarraa 2ffaa ta'uun kan itti xumuruun gadi-lakkisan tokko dha.
Sana booda gareewwan Zaambiyaa (2012) fi Ayivoorii Koosti (2015) waliin Waancaa Afriikaa injifachuu danda'anii jiru. Kilabii Firaansi Liil waliin turtii hin milkoofne erga taasisanii booda, 2016'tti garee Morookoo leenjisuu eegalan.
Iraan calallii Waancaa Addunyaa keessa galuun kun isa shanaffaadha, garuu qabxiin ol aanaa dorgommii keessatti qaban Firaansi bara 1998 irraatti Ameerikaatiin 2-1n kan mo'atan ture.
Goodayyaa suuraa Kaarloos Kuweerooz walitti fufinsaan Iraaniin Waancaa Addunyaaf geessiseera.
Taphataa adda-duree: Taphataan fuula duraa Sardaar Azmoon mormii tarii erga taphataan biyyasaa kan taphattoota dhiiraa kamiyyu caalaa goolii lakkoofsise Alii Daa'eyiin booda Eeshiyaa keessatti taphataa duraa ta'uu danda'a. Azmoon umuriin isaa waggaa 22 yommuu ta'u, miilla lamaaniinuu , akkasumas kubbaa qilleensarraa dhufeenis taphataa cimaa yommuu ta'u Kilabiisaa Raashiyaa keessa jiru Ruubiin Kazaaniif taphata.
Leenjisaan eenyu? Kaarloos Kuweerooz muuxannoofi barumsa (CV) kubbaa miilaa jaarmiyaa addunyaa keessatti leenjisaan/gaggessaan dorgomaa kamiyyu qabu ni qaba. Ispooringi Lisban irraa eegalee, Afirikaa Kibbaa, Riyaal Maadiriid, Maanchisteer Yuunaayitiditti gargaaraa Aleksi Fargusenii, akkasumas yeroo lamaaf itti gaafatamaa kan Poorchugaal kan dabarsan Kuweerooz waggootan ja'an darban ammoo Iraan waliin dabarsaniiru.
Akka sadarkaa FIFAtti Iraan sadarkaa akka Eeshiyaatti jiru 24ffaa irra taa'uu isaanii kan dubbatu leenjisaan lammii Poorchugaal ta'e kun, "Jireenya isaaniif morkatu, seenaaf morkatu, kabaja isaaniif morkatu," jedha.